May 7, 2017 2:55 b 2
Horyaalka Ingriiska waxaa laga ciyaaray xalay kulamo xiiso badan kuwaas oo natiijada kala sarraynta kaalimaha afraad iyo saddexaad wax ka badalay; maantana waxaa la ciyaari doona kulamo kale.
Dhanka horyaalka Spain, labada kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona ayaa kulamo ciyaaray.
marka hore waxan salamaya radio daljir iyo c/raxaman yamani oo aan uga baranay soo jedinta barnamijka xisaha badan ee sportiska hadan fikirkayga ka dhiibto ciyaartii xalay ee man city guusha ku gaadhay anigu waxan odhan lahaa way u walanta 5-0 wayna u qalanta inay qaado horyaalka aadbad u mahadsan tihiin dhamaan shaqalaha idacada oo ugu horeeyo injineer cali mursal.
barnaamijka saaka & dunida ee kabaxa radio daljir waa barnaamij aan anigu ka shaqsi ahaan sigaara u danayo waana barnaamij isugu jira wararka caalamka ciyaaro iyo xubinta wargeysyada oo aan sigaara u danayo runtii ee uu sojeediyo weriye xuseen madar jimcale